Iingcamango ezingama-58 eziPhezulu zePatio ezingama-2021 - Iingcamango zoPhando lwePatio yangaphandle kunye neefoto - Ukuhonjiswa Kwehlobo Kunye Nesitayile
Iingcamango ezingama-58 eziPhezulu zePatio ezingama-2021 - Iingcamango zoPhando lwePatio yangaphandle kunye neefoto
Nokuba unayo encinci iyadi okanye a igadi ethe saa , Isikhokelo sethu ekwenzeni ubunewunewu ngaphandle Indawo izokunceda ukuba usebenzise ngokupheleleyo imozulu eshushu (kwaye wandise ukuxhoma kwangaphandle kwiinyanga ezipholileyo kunye nemibono yoyilo elungileyo). Ke funda isitayile izimvo zasemva kwendlu kunye nepatio ukuzama kwizithuba zakho, ukusuka kumbala Uyilo lwethayile iingcebiso kwiindawo zokutyela ezincinci. Umoya omtsha kunye nesitayile esitsha ngaphambili.
🏡 Uthando ukujonga indawo yoyilo ye-inspo? Nathi, nathi. Masiqwalasele ngaphezulu kunye.
Jonga igalari 58Iifoto UROMULO FIALDINI 1Ngama-58Izinto eziXhaswe ekuhlaleni
Umyili uMaria Augusta Luoro we Uyilo lweGuta Louro imbuyisele kwikhaya lakhe lokungakhathalelwa ebuntwaneni kubuqaqawuli bayo bangaphambili, kunye nezinye. Izinto ezifumaneka kwindawo eyakhiwe ngasemva zivumela le ndawo yealfresco ipatio ukuba idibanise ngqo nelizwe elisemaphandleni laseSão Paolo. I-grill egqunyiweyo kunye nebha emanzi vumela ukutya ngaphandle ngaphandle kwengxwabangxwaba yohlaziyo lombhobho olufunekayo ekhitshini elipheleleyo.
IBrigette Romanek Studio MbiniNgama-58Ukuxhobisa amaQela
Lungiselela ipatio yakho kumaqela angaphandle esidlo ngenkqubo yesandi. Le ngu Isitudiyo soYilo saseRomanek ikulungele ixesha elihle elinokukhanyisa okuninzi kunye nezihlalo ezongezelelweyo. Ingcebiso yepro: Khetha izithethi ezinombala ofanayo neendonga zakho zangaphandle ukuze zingene.
isipho somfazi weeValentines
UTrevor Tondro 3Ngama-58Ukuzalela iBougainvillea
Umyili UMadeline Stuart wanika ngasemva kwale khaya le-SoCal ngabaqulunqi uWallace Neff noJohn Byers igadi ephuphayo evakalelwa kukukhanya kwe-antique accent kunye ne-bougainvillea eninzi. Ukufudumeza ipatio nangakumbi, wongeze ityali yendawo kwaye wakhetha iitshokholethi ezimdaka ngetshokholethi.
UFrank omangalisayo 4Ngama-58Ibhentshi yothando
Isitulo esincinci sabucala esithandwayo esishiyelwe phantsi komthunzi wemithi sibeka imeko yothando egadini kule patio. Amanqaku ebhonasi athelekisa ilaphu elibomvu nelimhlophe kwiintyatyambo ezinyuka ngesahluko sekhaya.
UFrank omangalisayo 5Ngama-58Zonke iindawo eziMhlophe
Ipatio emhlophe yonke igcina indawo ipholile xa ilanga libetha kuyo kwiinyanga ezifudumeleyo. Ikwavumela ukuba iintyatyambo ezintle zivelise nangakumbi.
UNicole Hollis Studio 6Ngama-58Iigwegwe zokuGcina
Eyilwe nguNicole Hollis Studio, le patio yanamhlanje zombini iyasebenza kwaye iyasebenza. Amagwegwe enza ukuba kube lula ukuxhoma iitawuli kunye neminqwazi, ukugcina indawo icacile ekuxinaneni kwiintsuku zasehlotyeni ezishushu.
Umhlaza kaRobson 7Ngama-58Izinto zale mihla
Le patio yegalari-esque eyilwe nguRobson Rak ibonisa izinto ezininzi ezothusayo, ukusuka kwiitayile ezipholileyo zemabhile ukuya kwiindonga ezikhanyayo zezitena kunye nesitulo seterrazzo.
Uyilo lweLH 8Ngama-58Abatyali beDonga
Yenza udonga lwepatio luhle kunye noluhlu lwezityalo. EMazantsi eCalifornia – esekwe Uyilo lweLH bavelise ezi zinto zinee-succulents.
Amy Neunsinger 9Ngama-58Iithayile zeTerracotta
Iphuli yindawo ekugxilwe kuyo ngokucacileyo kule yadi intle kangaka iyilwe nguNickey Kehoe. Iithayile ezinzulu ze-aqua kunye ne-canopy eluhlaza yemithi ejikeleze ikhaya ibeka imeko ngelixa iithayile zepatiyodi kunye nefanitshala engaphantsi kwefanitshala yanele ngokwaneleyo.
UKUGQIBELA JOLIET 10Ngama-58Umngxunya woMlilo oSiqhelekileyo
Njl njl I-etera yenze lo mngxuma womlilo wangaphandle ucolile kwaye unestayile ngokongeza ii-cushion zesiko kwibhentshi eyakhelweyo. Ilaphu eliprintiweyo longeza isimilo, umbala, kwaye, okona kubaluleke kakhulu, kwindawo ethile efanelekileyo ukuhlala ngasemlilweni.
UFrank omangalisayo Shumi elinanyeNgama-58Ukuhlamba ngaphandle
Le patio inezo zonke iintsimbi kunye neempempe, ezivela kwi-chic, ephakamise i-jacuzzi kwisitya sokuhlambela esingaphandle esine-tubular chrome ukucoca emva kokuntywila.
Uyilo lweKingston Lafferty 12Ngama-58Iithayile ezihlekisayo
Unokukhetha ukuhonjiswa kweenkuni zakudala okanye ungathatha isicatshulwa kule patio yaseKingston Lafferty-yenzelwe kwaye uyenze. Iithayile ezihlekisayo zizisa uvuyo olukhulu kunye nokuqaqamba kwisithuba ngelixa izakhelo zangoku kunye netafile eluhlaza cobalt zongeza umda omncinci.
U-Anson Smart 13Ngama-58IBistro Nook
Ukuba ipatio yakho ikwicala elincinci, setha nje indawo epholileyo ukonwabela ikomityi yekofu kunye nephepha lasekuseni-okanye indawo yokulala ebusuku. Kule patio yiArent & Pyke, itafile yomgangatho wokujikeleza, ibhentshi eyakhelweyo, kunye nezihlalo konke okufuneka ukongeza isimbo sesitayile.
UDacian Groza 14Ngama-58Ibhedi yasemini e-Canopied
Le patio yokutyela yenzelwe nguHeather Hilliard ilungele ukubhiyozelwa kwangaphandle ngelixa i-canopied daybed ngaphaya kwayo ilungile njenge-lounging-singasathethi ke, yongeza iitoni zobuqhetseba engceni, ebiya kuba yindawo engenanto.
Uyilo lweKingston Lafferty Shumi elinantlanuNgama-58Umthombo weNdala
Umthombo wekona ubeka ukugqitywa kokugqibela kwipatio ebabazekayo eyenziwe nguKingston Lafferty Design. Ifenitshala eluhlaza okwesibhakabhaka yahlula amathoni afudumeleyo kwizitena eziveziweyo.
UJen Feldman 16Ngama-58Igravel kunye neeHedges
Olunye ukhetho lomgangatho wepatio yakho? Utyando. Apha, uJenn Feldman wagcina izinto zimnyama ngombala womlilo wekhonkrithi kunye nezihlalo ezihambelanayo. Iithango eziphezulu zongeza zombini ubumfihlo kunye nomdlalo weqonga.
Isitudiyo soYilo saseRomanek 17Ngama-58Imvakalelo yendawo
Vumela ubume bendalo bunyanzelise ukhetho lwakho kunye nezinto eziphathekayo. Le patio yomgangatho omncinci ngu Isitudiyo soYilo saseRomanek ithatha ubume bokubuyela umva kunye nokuma okungqongileyo kweMalibu kunye nobuhle bayo obungaphantsi.
UMFANEKISO: UDustin Askland; UYILO: U-Elizabeth Roberts Uyilo kunye noYilo 18Ngama-58Iipillow zemibala ezahlukileyo
Ukulungelelanisa imijelo yakho yokuphosa kwiintyatyambo kunye nokuxhoma isibane esingapheliyo sokucoca izinto. Kwaye, utshintsha eyakho imiqamelo yindlela elula (kunye nexabiso elifanelekileyo) yokuphucula ipatio yakho nganye yexesha.
UBrittany Ambridge 19Ngama-58Iitafile zePatio ezahlukeneyo
Ngaphandle kwethala laseHouston eliyilwe nguCelerie Kemble kunye noLindsey Herode, iitafile ezimbini zesikwere zityhala kunye ukulungiselela iindibano ezinkulu. Izitulo zamangcwaba zivela eMcKinnon naseHarris.
ULauren Stephanie Wells Amashumi amabiniNgama-58Izitulo zobugcisa
Le patio zombini iyangeneka kwaye iyilo-phambili, ibekwe umva kwaye yahlanganiswa. Kwi-vibe efanayo, khetha izitulo zokulingisa ezenza ingxelo. Okanye, ukuba unezitulo zokurhola ezifikelelekayo ezinje ngezi, yenza ubuqhetseba kwaye upeyinte i-canvas ngokwakho.
izimvo zegumbi lamantombazana akwishumi elivisayo
UMarion Brenner amashumi amabini ananyeNgama-58Isidlo sakusasa ngaphandle iPatio
UWendy Owen wenza 'ipatio yesidlo sakusasa' kwipropathi yakhe kaSonoma esebenzisa izitulo zekhefi zaseFrance kunye netafile yamatye. Izitya zenziwe ngu-Astier de Villatte.
Isitudiyo soYilo saseRomanek 22Ngama-58Yenze iluhlaza
Ukuba uhlala esixekweni okanye ipatio yakho incinci, sebenzisa indawo yakho ethe nkqo ukwazisa uhlaza. Ngenxa yokuba le patio yi-Romanek Design Studio inamatye amaninzi, indawo eluhlaza iyayikhanyisa kwaye iyenze ibonakale ngathi yindawo entle. Indawo yokubasa umlilo ikwazisa ubushushu kwi-cozier yangaphandle.
UNicole Franzen 2. 3Ngama-58Indawo yokuKhangela
Ngelixa izitepsi ezijikelezayo eziluhlaza zibetha kakhulu, eyona showstopper nantsi umbono. Ukuba ipatio yakho ijonge ubuhle bendawo, layisha izitulo zokuhlala uze uyibize usuku kwipatio.
UDavid A. Umhlaba 24Ngama-58Itheyibhile yeTeak Patio
Ibhanti ibandakanya isidlo sasemini kwifresco kwikhaya laseFlorida. Umyili u-Andrew Howard ufumene izitulo ze-wicker kunye netafile ye teak e-Kingsley-Bate.
Indlela yokuphila ye Studio 25Ngama-58Ukuhla kweTile yePad
Njalo uthi ewe kwi-bougainvillea kunye nemingxuma yomlilo. Ukwenza indawo yokuhlala ive ngathi yeyayo kwi-patio enkulu, beka ezinye iithayile ezenza ukuba ime.
UAnnie Schlechter 26Ngama-58Ukulungelelanisa izihlalo zePatio
Izitulo zeAdirondack, zipeyintiweyo ukutshatisa indawo yokubaleka yaseNorth Carolina, mema iindwendwe kwithafa. Umyili wezakhiwo uJames Carter wongeze esinye isenzo sentsimbi-ikhabhathi kwitshimini yeenkuni kunye nefenitshala yangaphandle-ukukhulisa inkohliso yokuba le ndlu isandul 'ukwakhiwa yinto yakudala.
UMFANEKISO: Ihlathi leFeliks; Uyilo: iArente kunye nePyke 27Ngama-58Indawo ePhakamileyo
Le patio inesitayile idibanisa kakuhle nendalo esingqongileyo ngenxa yesikimu sombala kunye nezixhobo. Ukwenza indawo yangaphandle ive ngathi ibekwe ndawonye njengegumbi lokuhlala, yazisa umbhoxo ongaphandle kunye nezihlalo eziphakamileyo ezinje ngeveranda yanamhlanje.
UBjörn Wallander 28Ngama-58IPatio Mood Izibane
Iiveki zeJill Sharp zazisa izityalo ezintsha, ifenitshala, kunye nezibane zomtya ukunceda igadi yaseCharleston izive ngathi yandiswa kumgangatho wokuqala wekhaya.
UNicole Franzen 29Ngama-58I-Chic Hammock
I-vibes yeholide yesiteshi ngokuxhoma i-hammock encinci kunye nokongeza ifanitshala ephefumlelweyo yendalo, enje ngesihlalo kunye nelounger. Emva koko upeyinte yonke into emhlophe kwaye uzenze ngathi useSororini.
UVictoria Pearson 30Ngama-58Isitya somlilo sePatio
Ngephalethi yesitshixo esisezantsi ephefumlelweyo kwigadi yasekhaya yeorenji, eli khaya laseCaliforniaIquka i-Ojai's-no-hurries, no-worries vibe.Indawo yokuhlala ekhululekile kunye nesitya somlilo ivumela usapho ukuba luhlale phandle ebusuku.
OkulandelayoIingcamango ezingama-50 zasemva kwendlu yokuGuqula indawo yakho ibe yiParadesi Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUHadley Mendelsohn Umhleli oMkhulu UHadley Mendelsohn ngumhleli ophakamileyo weNdlu, kwaye xa engaxakekanga ethathela ingqalelo kuzo zonke izinto ezinxulumene nokuhonjiswa, unokumfumana ethengisa iivenkile zokuvuna, efunda, okanye ekhubeka kuba mhlawumbi waphulukana neiglasi zakhe kwakhona.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
umhombiso ongaphandle wekrisimesi weenkwenkwezi
umbala wegumbi lokuhlala
Iifilimu zothando zekrisimesi ezithandwayo